Xasan Sheekh oo laga waayay shir madaxeedkii labaad oo caalami ah [Maxaa ka jira in loo diiday shirarka Caalamiga?] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xasan Sheekh oo laga waayay shir madaxeedkii labaad oo caalami ah [Maxaa ka jira in loo diiday shirarka Caalamiga?] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha xilka sii haya ee Soomaaliya ayaa laga waayay kana xaadiri waayay shir madaxeedkii labaad ee madaxda dalalkooda ay ka qeyb galaan.
Shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee Midowga Afrika ee looga hadlayo ammaanka Badaha & horumarinta ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa Soomaaliya u metelaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya C/salaam Hadliye Cumar, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh oo xilkiisu dhammaaday uu gebi ahaanba ka fariistay safaradda dibadda oo uu aad u jeclaa.
Shirkii ugu muhiimsanaa ee Xasan Sheekh ka baaqday ayaa iska ahaa Shirkii Golaha Guud ee Q/Midoobay oo isna uu Soomaaliya uga qeyb galay wasiir Hadliye.
HOOS KA AKHRI/DHAGEYSO XILDHIBAAN KASHIFAY IN XASAN SHEEKH LOO DIIDAY SHIRARKA CAALAMIGA AH
DHAGEYSO: Xildhibaan kashifay in Xasan Sheekh loo diiday Shirka Golaha Guud ee Q/Midoobay
Previous articleAKHRSO: Liiskii ugu danbeeyay Musharixiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha & ku xigeenka Hirshabeelle
Next articleNISA oo xabsiga dhigtay Tifaftire Wargeys, albaabadana u laabay xaruntii Wargeyska